राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: नेकपा हाई-हाई काँग्रेस बाइ-बाइ - Nepali Online News Nepal
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: नेकपा हाई-हाई काँग्रेस बाइ-बाइ
January 23, 2020 January 23, 2020 Bishwa Ghatana0Comments नेकपा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
९ माघ २०७६ काठमाडौं : राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले १६ सिट सुरक्षित गर्दा नेपाली कांग्रेस सुन्य सिटमा सिमित भएको छ । १८ पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपाका १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना निर्वाचित भएका छन् ।
यो संगै विहीबारको निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा रहेका कांग्रेसका ७ जना सांसदको सीट घटेको छ ।
निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभामा प्रदेश एकबाट ३ जना, प्रदेश दुईबाट ४ जना , बागमतीबाट २ जना, गण्डकी प्रदेशबाट २ जना, प्रदेश पाँचबाट ३ जना, कर्णालीबाट २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ जना निर्वाचित भएका हुन् ।
नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग प्रदेश २ मा गरेको तालमेलमा २-२ सिट बाँडफाँट गरेको र राजपा र नेकपाले २-२ सिट नै जितेका छन् ।
कुन प्रदेशबाट को-को बिजयी ?
प्रदेश १ बाट नेकपा उम्मेदवारहरु गोपी अछामी, इन्दिरा गौतम र देवेन्द्र दाहाल निर्वाचित भएका छन् । अछामी दलिततर्फका सदस्य हुन् भने गौतम महिला र दाहाल अन्यतर्फका सदस्य हुन् ।
दलिततर्फका सदस्य अछामीले ६ हजार ३ सय ३० मत पाएर बिजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका निरबहादुर विकले २७ सय १८ मत पाए भने समाजवादी पार्टीका ज्ञानबहादुर परियारले ६ सय ६४ मत पाएका छन् ।
महिलातर्फ विजयी इन्दिरा गौतमले ६ हजार ४ सय २२ मत पाएर बिजयी भएकी हुन् । अन्यतर्फ विजयी दाहालले ६ हजार २ सय ३४ मतपाएर बिजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्र घिमिरेले २ हजार ७ सय ६६ र समाजवादी पार्टीका भरतबहादुर दाहालले २ सय ६४ मतभार पाए ।
प्रदेश २ मा नेकपाका दुइ जना तुलसा दाहाल र राधेश्याम पासवान निर्वाचित भए भने राजपाका दुइ जना मृगेन्द्रसिंह यादव र शेखर सिंह निर्वाचित भएका छन् ।
दाहाल महिला सदस्य र पासवान दलित सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै यादव अन्य समूहबाट र सिंह अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
५ हजार २ सय ८ मतका साथ विजयी भएकी नेकपाकी दाहालले नेपाली कांग्रेसकी नगिना यादवलाई हराएकि हुन् । यादवले ४ हजार ७ सय ४० मतभार पाइन् ।
५ हजार २ सय ९२ मतभारसहित विजयी भएका पासवानले समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासवानलाई पराजित गरे । पासवानले ४ हजार ७ सय ४ मतभार पाएका थिए ।
राजपा उम्मेदवार मृगेन्द्र सिंह यादवले आफ्नै भाइसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका अनिरुद्र यादवलाई पराजित गरे । मृगेन्द्रले ५ हजार ४ सय र अनिरुद्रले ४ हजार ५ सय १२ मतभार पाए ।
राजपाका शेखर सिंहले नेपाली कांग्रेसका भोला पञ्जियारलाई पराजित गरे । सिंहले ५ हजार ५ सय २ र पञ्जियारले ४ हजार ५ सय १२ मतभार पाए ।
प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा महिलामा गंगाकुमारी बेलबासे र अन्य समूहमा बेदुराम भुसाल निर्वाचित भए । बेलबासेले ६ हजार ८ सय २८ र भुसालले ६ हजार ८ सय १० मत पाए ।
बेलबासेले कांग्रेसकी छलीकुमारी शर्मा उपाध्याय र नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी गीता काफ्लेलाई पराजित गरेकी हन् । भुसालले कांग्रेसका हरिशरण श्रेष्ठ र नेमकिपाका कृष्णबहादुर तामाङलाई पराजित गरेका हुन् ।
न्यौपानेले कांग्रेसकी विमला गौचनलाई १ हजार २० मतअन्तरले पराजित गरिन् । न्यौपानेले ३३ सय ६६ र गौचनले २३४० मतभार पाए ।
प्रदेश ५ बाट राष्ट्रियसभामा विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा र गोपालप्रसाद भट्टराई निर्वाचित भए । महिला सदस्यमा घिमिरे, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक सदस्यमा शर्मा र अन्य समूहबाट भट्टराई निर्वाचित भएका हुन् ।
घिमिरेले नेपाली कांग्रेसकी गिरिजादेवी न्यौपाने, शर्माले कांग्रेसका मेराज अहमद हलवाई र समाजवादी पार्टीका सुनीलकुमार सिंघललाई पराजित गरे । त्यस्तै भट्टराईले कांग्रेसका बालकृष्ण पाण्डे र समाजवादी पार्टीका कृष्णप्रसाद अहिर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शिवप्रसाद पौडेललाई पराजित गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट नेकपाकै अन्य समूहका मायाप्रसाद शर्मा र महिला समूहकी सुमित्रा विसी निर्वाचित भए । शर्माले तीन हजार ६ सय १८ मतभार पाए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डिल्लीराम पाठकले एक हजार २६ मत पाएका हुन् ।
यस्तै, बीसीले तीन हजार ६ सय ८४ र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी गणेशकुमारी बस्नेतले एक हजार २६ मत पाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला समूहबाट शारदा भट्ट र अन्य समूहबाट तारामान स्वाँर निर्वाचित भएका हुन् । भट्टले ३ हजार ७ सय ३८ र स्वाँरले ३ हजार ७ सय २० मत पाएका छन् । महिला समूहकी कांग्रेस उम्मेदवार तुलसा देवकोटाले १ हजार ८ सय ५४ र अन्य समूहका कांग्रेस उम्मेदवार प्रताप ठगुन्नाले १ हजार ८ सय ४२ मत पाएका छन् ।
← कोरोना भाइरस के हो ? लक्षण र बच्ने उपाय
कोपा डेल रे: तेस्रो श्रेणीको क्लबसँग एटलेटिको लज्जापद हार →